Quo vadis, Filipina? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2017 19:42 GMT
Tsy nahavita firy mba hampitsaharana ny korontana ara-politika tao Filipina ny fanesorana ny Fanambarana faha 1017, na ny Firenena Latsaka An-katerena,
Nony farany, niatrika ny hazo meloka noho ny fiampangana azy ho nandroba ny Joseph Estrada, filoha niala tamin'ny asany tamin'ny 2001, taorian'ny fitsaràna fitsipaham-pitokisana tsy nahomby. Fihatsarambelatsihy io, hoy i Willie Galang… ary hadalàna.
Ho fanampin'ny fampisehoana an-tsehatra, tsy ho gaga aho raha hivadika (indray) i Estrada ary tsy hanaiky (indray) ny fahefan'ny fitsarana ary avy eo “handroaka” ny mpisolovavany (indray) mba hanatarazohana fotsiny ny raharaha, raha izy kosa hanohy hipetraka sy hijery raha afaka hitondra fahagagana ireo miaramilany Magdalo sy raha hahavita ny handresy amin'ny fanonganam-panjakana amin'ity indray mandeha ity mba hipetrahany ho mpitarika ny vondrona mpanongam-panjakana iarahan'ny sivily sy miaramila. (Ary eny, Cory Aquino sy Fidel Ramos samy afaka mipetraka eo amin'ny havanany. Mpiaradia daholo ry zareo izao, raha tadidiko?)
Ho an'ireo izay mino fa hanova ny olana eo amin'ny firenena ny fiovana kely ao anaty fitondrana–rehefa mandao ny Malacañang i Gloria Arroyo dia ho tapitra ny korontana, na am-pilaminana na an-keriny. Nosoratan’ i Luis Teodoro ny momba tolokevitra avy amin'i Senatera Edgardo Angara izay mihevitra fa misy fomba ara-dalàna ho an'ny fiantsoana fifidianana alohan'ny fotoana. Nanao “hetsika faobe” tamin'ny Zoma 24 Martsa ny hetsika Mainty sy Fotsy izay tsy voajerin'ny polisy akory–hetsika fangalana sary ilay izy. Nitaraina i Caffeine Sparks, Patalsikin na! Now na!, izay hoe “ka.. Andefaso hafatra, tahaka ny efa hoe sangy ratsy” no teny filamatra faran'ilay vondrona. Nahaliana, mampatsiahy an'ireo fomban'ny burgis (andriana) manafangaro Tagalog sy teny Anglisy izay nataon'ny colegialas nalaza(ratsy) nandritra ny 1970.
Ho an'ireo izay mahita ny olana ao Filipina ho tahaky ny fanehoana ny tsy fahazoana aina ara-koltoraly sy sosialy lalina, tsy misy ny vahaolana haingana. Nanindry i Arnel Endrinal, biloagera vao manomboka, fa olana 10 no tsy voavaha nandritra ny fitondrana dimy farany teo, miaraka amin'ny iray amin'izao fotoana izao. Hasarotin'ireo ady tombontsoan-tsaranga ny fandrafetana fandaharanasa izay ho eken'ny rehetra–raha mieritreritra momba vahaolana tokoa ny maro an'isa. Araky ny famintinana nataon'i Luis Teodoro– mitovy ny fitiavantenan'ny kilasy antonony sy ny mahantra. Variana amin'ny fitazonana ny fari-piainany ny kilasy antonony; “variana loatra amin'ny fivelomana” ny mahantra ka tsy afaka ny hiraharaha.
Tsy nihena ny fihenjanana eo amin'ny Fanjakana sy ny gazety. Nanoratra momba ny tolokevitra maika nofenoin'ny Vondrona Mpanohana Maimaimpoana amin'ny resaka Lalàna (FLAG), vondrona mpisolovava momba ny Zon'olombelona, mba hahitàna vahaolana haingana momba ny fanangonantsonia nofenoina vao haingana tamin'ity volana ity vokatry ny fanambarana nataon'ny Lohan'ny Komitin'ny Fifandraisandavitra Nasionaly, Ronald Solis, izay mitondra amin'ny hoe azon'ny Fanjakana atao ny mametraka torolalana ara-dalàna amin'ny vaovao amin'ny fampielezampeo.
Ohatra ny tsy misy koa ny vahaolana avy hatrany ho an'ny olana eo amin'ireo fampahalalambaovao mahazatra (MSM) sy ny bilaogy. Notsafaina ho an'ny lahatsoratra an-gazety iray ny My Liberal Times izay miresaka koa momba ny hoe maninona no tsy mijery an-katsarampanahy ny bilaogera ny MSM.
Mandritra izay fotoana izay, ho an'ny hafa, mizotra toy ny mahazatra ny fiainana. Bilaogin'ny mpiasa Filipianina any ampitan-dranomasina nandritra ny 13 taona ary te”hiverina hody an-tanindrazana sy hanao raharaham-barotra kely” ny EntrePinoys. Amin'ny alàlan'izo bilaogy io, tantarainy ny fikarohana nataony momba ny ho endrik'izay raharaham-bartra any an-tanindrazana izay.
Ary farany, nanao fanehoankevitra mahery ny ExpectoRANTS tamin'ireo karazana vaovao sy hevitra izay tsy mampahafantatra na manazava mandrakariva. Na miresaka momba ny MSM na ny bilaogy, na izy roa, asainy ny tsirairay mba hamaky ireo kilasika mba hanampy antsika miaraka amin'ny:
- fandrosoana ny hevintsika
– fitadiavana ny hevitry ny vaovao ‘nahodinkodina’
– fanavahana ny loharanom-baovao voalohany sy ny lainga marivo tototra
– zavatra kely tsy nasiana fanamarihana na tsy voalaza
– fanaovana hintsin-dàlana amin'ny zava-misy mibaribary.
– fanivanana ireo fitaovana fampielezankevitra
– famantarana porofo tsy azo lavina
– fanavahana ny akofa sy ny voa tena ilaina